Avanafil (330784-47-9) निर्माता आपूर्तिकर्ता कारखाना
अवानाफिल इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED: नपुंसकता; पुरुषमा erection प्राप्त गर्न वा राख्न असमर्थता) को उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। अवानाफिल औषधीहरूको वर्गमा हो जसलाई फास्फोडीस्टेरेस (PDE) अवरोधकहरू भनिन्छ। यसले यौन उत्तेजनाको बेला लि to्गमा रक्त प्रवाह बढाउँदै काम गर्दछ। यो बढेको रगत प्रवाह एक निर्माण गर्न सक्छ। अवानाफिलले इरेक्टाइल डिसफंक्शनको उपचार गर्दैन वा यौन इच्छा बढाउँदैन। अवानाफिलले गर्भावस्था वा मानव रोग प्रतिरोधात्मक जीवाणु (एचआईभी, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, सिफलिस) जस्ता यौन रोगहरूको प्रसारलाई रोक्दैन। सबै यौन गतिविधि को दौरान। अधिक जानकारीको लागि आफ्नो डाक्टर वा फार्मासिष्टबाट परामर्श लिनुहोस्।
Avanafil पाउडर आधार जानकारी
नाम Avanafil पाउडर
आणविक वजन 483.95G / mol
पिल्ट बिन्दु 150-152 ° C
आणविक सूत्र C23H26 CLN7O3
औषधिको खुराक 100mg
अफसेट समय 30minutes
के तपाईंलाई थाहा छ संयुक्त राज्य अमेरिकामा 30० करोड भन्दा बढी पुरुषको ईरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) छ? अमेरिकामा किन धेरै ईडी औषधीहरू बेचिन्छ भनेर वर्णन गर्दछ। त्यस्तै एउटा औषधि अवानाफिल हो। Sendra छ avanafil ब्रान्ड नाम तपाइँसँग परिचित हुन सक्नुहुन्छ।
अवानाफिल (स्टेन्ड्रा) PDE-5 (phosphodyterase-प्रकार 5) अवरोधक हो जसले PDE-5 लाई रोक्दछ।
जब तपाईं यो औषधि लिनुहुन्छ, यसले तपाईंको शरीरमा केही रक्त नलीहरू र मांसपेशीहरूलाई आराम दिनेछ जसले गर्दा तपाईंको लि to्गमा रगत प्रवाह बढाउँदै ईरेक्शन प्राप्त गर्न मद्दत हुनेछ। यस कारणले यो ईरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) को उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। जस्तो Levitra® (vardenafil), Cialis® (tadalafil), र Viagra® (sildenafil), avanafil तपाइँलाई सजिलो बनाउन को लागी erection केहि समय को लागी निर्माण गर्न।
अवानाफिल (स्टेन्ड्रा) तुलनात्मक रूपमा नयाँ छ, जुन २००० को दशकमा जापानको मित्सुबिशी तानाबे फार्माले विकास गरेको हो। संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) अप्रिल २०१२ मा ED को उपचारको लागी औषधिलाई अनुमोदन गर्‍यो, जबकि यूरोपियन मेडिसिन एजेन्सी (EMA) ले जून २०१ 2000 मा यसलाई अनुमोदन गर्‍यो।
धेरैबाट avanafil समीक्षा, तपाईले याद गर्नुहुनेछ कि यसको लेभिट्रा, सियालिस, भियग्रा, र अन्य ईडी औषधिहरूको तुलनामा कम साइड इफेक्टहरू छन्।
यसको गहिरो खन्नुहोस् र यस औषधिको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
Avanafil कसरी Erectile Dysfunction व्यवहार गर्दछ
Avanafil ईडी वा नपुंसकताको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ, जुन एक निर्माण प्राप्त गर्न र त्यसलाई कायम राख्न असमर्थताको रूपमा परिभाषित हुन्छ। अवानाफिल ड्रग्सको कोटीमा पर्दछ जुन फास्फोडीस्ट्रेजलाई अवरोध गर्दछ।
नोट गर्नुहोस् कि तपाईंलाई इरेक्शन प्राप्त गर्न, तपाईंको पेसाइल रक्त वाहिकाहरू रगतले भरिन्छन्। जब यो रक्त वाहिकाको आकार बढ्छ, यस्तो प्रकारले तपाईको लिis्गमा बढी रगत सार्छ। एकै साथ, तपाईको लि of्गबाट ​​रगत निकाल्ने रक्तवाहिनाहरूको आकार घट्ने छ त्यसैले रगत तपाईको पेन्सिल मांसपेशिहरुमा बढी रहन्छ, यसैले निर्माणलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिनेछ।
जब तपाईं यौन उत्तेजित हुनुहुन्छ, तपाईंले erection प्राप्त गर्नुपर्दछ। यो इरेक्शनले तपाईको लि release्गलाई नाइट्रिक अक्साइड रिलिज गर्दछ, यौगिकले कि गुयनालेट साइक्लाज (एन्जाइम) उत्पादन गर्न सीजीएमपी (चक्रीय गुनोसिन मोनोफॉस्फेट) उत्पन्न गर्दछ, महत्त्वपूर्ण इन्टरसेल्युलर मेसेन्जर जसले धेरै शारीरिक प्रक्रियाहरू नियमित गर्दछ।
वास्तवमा, यो चक्रीय न्यूक्लियोटाइड हो जुन रक्तवाहिनीको आराम र संकुचनको लागि जिम्मेवार छ जुन लि blood्गबाट ​​र लि blood्गमा रगत लिने कामको लागि निम्त्याउँछ। जब अर्को इन्जाइमले सीजीएमपी नष्ट गर्दछ, रगत नलीहरूले लि original्ग छोड्ने रगतको कारण आफ्नो मूल आकारहरू पुन: प्राप्त गर्दछन्, र त्यसले इरेक्शनको अन्त्यलाई चिह्नित गर्दछ।
जब तपाईं एभानाफिल लिनुहुन्छ, यसले PDE-5 लाई cGMP को विनाश हुनबाट रोक्नेछ, यसको मतलब cGMP अब लामो समय सम्म रहनेछ र तपाईंको इरेक्शनलाई धान्न सक्छ। CGMP जति लामो समयसम्म रहन्छ, रगत तपाईंको लिis्गमा लामो समय सम्म रहनेछ र तपाईंको इरेक्शन जति लामो हुन्छ।
के अवानाफिल (स्टेन्ड्रा) इरेक्टाइल डिसफंक्शनको उपचारको लागि प्रभावकारी छ?
यद्यपि एभानाफिल (स्टेन्ड्रा) एक नयाँ ईडी औषधि हो, धेरै अध्ययनहरूले यसको प्रभावकारिता ईडी उपचारमा प्रमाणित गर्दछ। २०१ drug मा गरीएको effective वटा अध्ययनमा यो औषधि प्रभावशाली छ कि भनेर पत्ता लगाउन २,२०० भन्दा बढी पुरुषहरूले भाग लिएका थिए र उनीहरू सबैलाई इरेक्टाइल डिसफंक्शन थियो।
अध्ययनको अन्त्यमा, एभानाफिल आईआईईएफ-ईएफ सुधार गर्न धेरै प्रभावकारी भएको पाईयो, अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांक निर्माण सम्बन्धी समस्याहरूको मूल्या assess्कन गर्न प्रयोग गरियो।
सबै व्यक्ति जसले यो औषधि लिएका थिए उनीहरूले IIEF-EF मा to० देखि २००mg सम्मको खुराकमा उल्लेखनीय सुधारहरू देखाए। अनुसन्धान परिणामहरूले यो पनि देखायो कि २००mg को अधिक मात्रामा avanafil बढी प्रभावकारी थियो। यसले अन्य ईडी औषधिहरूबाट एभानाफिल भिन्न गर्दछ जुन उच्च खुराकमा प्रतिकूल साइड इफेक्ट निम्त्याउँछ।
२०१२ मा सम्पन्न गरिएको अर्को अध्ययनमा, एभानाफिल राम्रोसँग सहन र ईडी उपचारमा धेरै प्रभावकारी भएको पाईयो। अध्ययनमा भाग लिने दुईजना पुरुषले १०० देखि २००mg को खुराकमा उल्लेखनीय सुधार देखायो।
एवानाफिल सम्बन्धी क्लिनिकल परीक्षणहरूमा, अनुसन्धानकर्ताहरूले रिपोर्ट गरे कि यसले सबै ED- सम्बन्धित प्रभावकारिता भ्यारीएबलमा तथ्याically्कगत रूपमा महत्वपूर्ण बृद्धि प्रदर्शन गर्दछ। यी परीक्षणहरू २ - - of 600 को उमेर कोष्ठमा men०० भन्दा बढी पुरुषहरू सम्मिलित थिए।
छोटकरीमा, एभानाफिल ईडीको लागि उपचारमा प्रभावकारी छ। धेरै अध्ययनहरूले प्रमाणित गर्‍यो कि यसले ईडी भएका सबै पुरुषहरूका लागि निर्माणको मापनयोग्य र महत्त्वपूर्ण सुधार गर्न सक्दछ, तिनीहरूको उमेरलाई वास्ता नगरिकन।
कुन राम्रो छ Avanafil वा Tadalafil?
अवानाफिल बजारमा सबैभन्दा नयाँ ईडी औषधि हो, तर यसले धेरै पुरानो ईडी औषधिहरू भन्दा राम्रो गर्छ। Avanafil वा Tadalafil दुबै ईरेक्टाइल डिसफंक्शनको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ, तर तिनीहरूको कार्यको मोडमा उनीहरूमा केही भिन्नताहरू छन्।
जबकि टाडालाफिल (सियालिस) दुबै विस्तारित प्रोस्टेट र इरेक्टाइल डिसफंक्शन लक्षणहरूको लागि प्रभावकारी उपचार हो, स्टेन्ड्रा सामान्यतया इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुनेहरूका लागि पहिलो विकल्प हो।
अवानाफिल बनाम ताडालाफिल: कुन छिटो काम गर्दछ?
ताडालाफिल र अन्य प्रथम पुस्ता इरेक्टाइल डिसफंक्शन ड्रग्सले उनीहरूको प्रभाव महसुस गर्न minutes० मिनेट देखि एक घण्टा सम्म लिन सक्दछ। र केहि अवस्थाहरूमा, तपाईंले केही भारी खाइसक्नुभएपछि, लागूपदार्थहरूले काम गर्न सुरू गर्न एक घण्टा भन्दा बढी लिन सक्दछ। यो एभानाफिलको कुरा होईन।
यदि तपाईं १०० - २०० मिलिग्राम उत्पादनको बीचमा लिनुहुन्छ भने, तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ avanafil प्रभाव १ 15 मिनेट भित्र मतलब तपाईले सेक्स गर्न सुरू गर्नु भन्दा केहि मिनेट पहिले यो लिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं एभानाफिलको एक कम खुराक लिनुभयो भने पनि, m०mg भन्नुहोस्, तपाईंले अझै 50० मिनेट भित्रमा एउटा निर्माण प्राप्त गर्नुहुनेछ।
अवानाफिल बनाम ताडालाफिल: कुनसँग कम साइड इफेक्टहरू छन्?
यद्यपि एवानाफिलका केही साइड इफेक्टहरू छन्, यी साइड इफेक्टहरू टडालाफिलको भन्दा त्यति धेरै छैनन्। को एवानाफिल साइड इफेक्ट ताडालाफिल जस्ता प्रतिकूल पनि छैनन्। उदाहरण को लागी, avanafil कम रक्तचाप र बिग्रेको दर्शन को कारण हुन सक्दैन; ट्याडलाफिल र अन्य ईडी औषधिहरूसँग सम्बन्धित दुई साइड इफेक्टहरू।
एवानाफिलको अर्को फाइदा यो हो कि यो कुनै अधिक साइड इफेक्टको कारण बिना उच्च खुराकमा लिन सकिन्छ। वास्तवमा, २००mg सम्मको उच्च खुराक कुनै पनि साइड इफेक्टको बारेमा चिन्ता बिना लिन सकिन्छ।
अवानाफिलले टेडालाफिल बिभिन्न किसिमले कार्य गर्दछ किनकि यसले फास्फोडीस्टेरेस-प्रकार en एन्जाइमलाई लक्षित गर्दछ, अन्य फास्फोडीस्ट्रेज एन्जाइमहरू जस्तै PDE5, PDE11, PDE6, र PDE3 लाई आक्रमण नगरी।
Avanafil खाना द्वारा प्रभावित छैन।
टाडालाफिल र अन्य पहिलो पुस्ता इरेक्टाइल डिसफंक्शन औषधीहरू प्राय: कम फ्याक्ट सामग्रीको साथ ठूलो खाना खाएपछि कम प्रभावकारी हुन्छन्। यसले उनीहरूलाई प्रयोग गर्न ठूलो चुनौती बनाउँदछ किनकि तपाईंले आफ्नो खाने समयको निगरानी गर्नुपर्दछ र तपाईं के खानुको बारेमा संवेदनशील हुनुहुनेछ।
अर्कोतर्फ, एवानाफिलले खाएको खानेकुराले असर गर्दैन, यसको मतलब तपाईले एभानाफिल प्रभावको आनन्द लिनुहुनेछ जुनसुकै कुरा तपाईले खाए र के खानुहुन्छ। यस कारणका लागि, यो औषधी प्रयोग गर्नु अघि उच्च उर्जायुक्त खाना खानु अझ राम्रो हुन्छ ताकि तपाईं आफ्नो यौन प्रदर्शनको लागि पर्याप्त ऊर्जा पाउन सक्नुहुन्छ।
अवानाफिल बनाम ताडालाफिल: मद्यको साथ कुनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ?
यो एक tadalafil औषधी मा जब रक्सी को सीमित वा बेवास्ता गर्न सल्लाह दिइन्छ। ताडालाफिललाई रक्तचाप कम गर्ने भनेर चिनिन्छ, त्यसैले रक्सीसँगै यसलाई सेवन गर्दा रक्तचाप तीव्र स्तरमा कम गर्न सकिन्छ।
रक्सीको साथ यो औषधि सेवन मुटुको धड्कन, टाउको दुख्ने, फ्लशिंग, बेहोशी, हल्का टाउको, र चक्कर आउने जस्ता लक्षणहरूसँग सम्बन्धित छ। अर्कोतर्फ, Sendra रक्सी पिए पनि, प्रयोग गर्न धेरै सुरक्षित छ। तपाईले सेन्डेरा लिनु भन्दा पहिले तीन रक्सी मदिराको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ, र तपाईंको स्वास्थ्यमा कुनै साइड इफेक्ट वा कुनै अन्य जोखिमहरू देखा पर्दैन।
जे होस्, यसको मतलब यो होइन कि तपाईं द्वि घातुमानमा जान सक्नुहुन्छ त्यसपछि सेन्ड्रा प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंले संयममा रक्सीको प्रयोग गर्नुपर्दछ किनकि रक्सी आफैले केही स्वास्थ्य समस्याहरू पनि निम्त्याउँछ। मदिरा एक शामक छ, र जब तपाईं यसको धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ, यसले तपाईंको यौन इच्छा कम गर्दछ र तपाईंलाई इरेक्शन प्राप्त गर्न गाह्रो बनाउँदछ। यसको मतलव रक्सीले ईडी औषधिहरूले प्राप्त गर्ने लक्ष्यलाई बेवास्ता गर्दछ।
देख्न सकिन्छ, avanafil धेरै लाभहरू छन् tadalafil। यसैले धेरै मेडिकहरू आफ्ना बिरामीहरूलाई यो सिफारिस गर्न मन पराउँछन्।
अरू ड्रग्सले के गर्नेछ Avanafil लाई प्रभावित गर्नुहोस्?
जबकि केहि औषधिहरू संयोजनमा प्रयोग गर्न सकिदैन, केहीलाई उनीहरूको प्रभावकारिता बढाउनको लागि मिलाउन सकिन्छ। जोसँग मिल्दैन भन्ने औषधि ती हुन् जसले एक अर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्दछन् र प्रतिकूल प्रभाव पार्दछन्। त्यसकारण तपाईलाई कुनै औषधि लगाउनु भन्दा पहिले तपाईलाई थाहा दिनुहोस् यदि तपाई पहिले नै अर्को औषधिमा हुनुहुन्छ भने। यदि तपाई ड्रग्स वा डोज परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने पनि यो केस हुनु पर्छ। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई समावेश नगरी आफैंमा केहि नगर्नुहोस्।
उदाहरण को लागी, तपाइँ लाईवित्र, Staxyn (vedaafil), tadalafil (Cialis), वा Viagra (sildenafil) जस्ता ड्रग्स संग संयोजन मा avanafil को उपयोग विरुद्ध कडा सल्लाह दिइन्छ। यी औषधिहरू ED र धमनी उच्च रक्तचाप (पल्मोनरी) को उपचार गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले तिनीहरूलाई एकसाथ एभानाफिलको प्रयोगले तपाईंको शरीरलाई ओभरलोड गर्न सक्छ र गम्भीर साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ।
तपाईंले एभानाफिलको प्रयोग सुरू गर्नु अघि, तपाईंको स्वास्थ्य प्रदायकलाई बताउनुहोस् कि यदि तपाईंले कुनै अन्य औषधीहरू लिइरहनुभएको छ, विशेष गरी:
औषधीहरूले ईरेक्टाइल डिसफंक्शनको उपचार गर्न प्रयोग गर्थे।
कुनै पनि एन्टिबायोटिकहरू जस्तै टेलिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, र अन्य
सबै एन्टिफंगल ड्रगहरू, ती मध्ये केटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल र अन्य
प्रमेट डिसअर्डर वा उच्च रक्तचापको उपचारको लागि प्रयोग गरिएको कुनै औषधि, तामसुलोसिन, टेराजोसिन, साइलोडोसिन, प्रोजोसिन, डोक्साोसिन, अल्फुजोसिन, र अन्य लगायत।
हेपेटाइटिस सी ड्रग्स जस्तै टेलेप्रेवीर र बोसेप्रेवर र अन्य।
एचआईभी / एड्स औषधिहरू जस्तै saquinavir, रीटोनाभिर, indinavir, atazanavir, र अरू।
माथिका सूचीहरू कुनै पनि हिसाबले विस्तृत छैनन्। त्यहाँ अन्य औषधिहरू छन् जस्तै Doxazosin र Tamsulosin जब avanafil सँगै प्रयोग गर्नाले तीव्र साइड इफेक्टको परिणाम दिनेछ। थप रूपमा, धेरै अन्य ओभर-द-काउन्टर र प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एभानाफिलसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन्। यसमा जडिबुटी उत्पादनहरू र भिटामिनहरू समावेश छन्। तलको रेखा यो हो कि तपाईंको डाक्टरको ज्ञान बिना एभानाफिलको साथ कुनै औषधि प्रयोग नगर्नुहोस्।
यो औषधि मात्र होईन जुन तपाईं होशियार हुनुपर्दछ, तर तपाईं सावधान पनि हुनुपर्दछ जब तपाईंसँग केही अंतर्निहित चिकित्सा अवस्था छ। त्यसोभए तपाईले एभानाफिल प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले तपाईको डाक्टरलाई थाहा दिनुहोस् यदि तपाईसँग निम्न मध्ये कुनै चिकित्सा समस्या छ भने
असामान्य लिंग - यदि तपाईं एक घुमाउरो लिंग छ वा तपाईंको लि some्ग केही जन्मजात अशक्तता छ, त्यहाँ उच्च संभावना छ कि यदि तपाईं avanafil प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंको स्वास्थ्य प्रभावित हुन सक्छ।
यदि तपाईं 50० बर्ष वा माथिका हुनुहुन्छ
यदि तपाईं भीडभाड डिस्क, कोरोनरी धमनी रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ वा तपाईंको आँखा कम कप-देखि-डिस्क अनुपात छ, र तपाईं हृदय रोग वा मधुमेह पीडित हुनुहुन्छ भने, रगतमा उच्च-फ्याटको स्तर (हाइपरलिपिडेमिया) वा उच्च रक्त दबाव (उच्च रक्तचाप)।
अन्य सर्तहरू जुन तपाईंले आफ्नो डाक्टरको ध्यानमा ल्याउनु पर्दछ:
गम्भीर आँखा समस्या
गम्भीर छाती दुखाई (एनजाइना)
अनियमित मुटुको धड्कन (एरिथमिया)
रक्त वाहिनिका समस्याहरू जस्तै इडिओपाथिक सबअर्टिक स्टेनोसिस वा एओर्टिक स्टेनोसिस
हार्ट अटैक पछिल्लो छ महिना भित्र अनुभव।
धूम्रपान को इतिहास
कम रक्तचाप (हाइपोटेशन)
पछिल्लो छ महिना भित्र स्ट्रोक
रक्त सम्बन्धित क्यान्सर (ल्यूकेमिया वा मल्टिपल मायलोमा)
सिकल-सेल एनीमिया, अन्यहरू बीच
PDE5 अवरोधकर्ताहरू, Sendra शामिल, केहि CYP3A4 अवरोधकर्ताहरू र अल्फा-ब्लकरहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छन्। यस कारणका लागि, यदि तपाइँ यी औषधिहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंको डाक्टरलाई थाहा दिन महत्त्वपूर्ण छ। समग्रमा, एभानाफिल ईडी उपचारको लागि एक प्रभावकारी र सुरक्षित उत्पादन हो।
अवानाफिल मुख्य रूपमा इरेक्टाइल डिसफंक्शनको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। केहि एवानाफिल फाइदाहरूमा यो तथ्य पनि समावेश छ कि यसले ईडी उपचारका लागि प्रयोग हुने सबै औषधिहरू भन्दा छिटो काम गर्दछ। तपाईंले सेक्स गर्न १ fifteen मिनेट लिन सक्नुहुनेछ र यो अझै पनि प्रभावकारी हुनेछ।
एभानाफिलको अर्को फाइदा यो हो कि तपाईंले यसलाई दैनिक लिनु हुँदैन प्रभावी हुन, तपाईं यसलाई लिन सक्नुहुनेछ र जब तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ। अवानाफिल राम्रोसँग शरीरले सहन्छ र खानाको साथ वा बिना लिन सकिन्छ। अवानाफिलसँग अरु ईडी औषधीहरू जत्तिकै साइड इफेक्टहरू हुँदैन, र तपाईं रक्सी पिए पछि पनि लिन सक्नुहुन्छ।
ईडी को उपचार मात्र एक हो avanafil प्रयोग गर्दछ। यो उत्पादन पनि रायनाउडको घटनाको उपचारको लागि प्रयोग गरिएको छ, यो एक अराजक जसले शरीरको केही अंश चिसो र सुन्न महसुस गर्दछ। रायनाउडको घटना तब हुन्छ जब शरीरको अ blood्गमा रगत प्रवाहमा कमी आएको छ, जस्तै नाक, घुँडा, निप्पल, औंला र कान। यो अवस्थाले छालाको र in परिवर्तन गर्दछ।
Avanafil बाट अधिक कसरी फाइदा लिन सकिन्छ
अवानाफिलले तपाईंलाई इरेक्शन प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ, तर यसको मतलब यो होइन तपाईं फोरप्लेको साथ टाढा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईंले सेक्स गर्नु अघि तपाईंको पार्टनरलाई फोरप्लेमा संलग्न गर्नुहोस् जस्तो कि तपाईंले औषधि नलिईकन गरेको हुन्छ। याद गर्नुहोस् कि एवानाफिलले तपाईंलाई ईरेक्शन प्राप्त गर्न मात्र मद्दत गर्दछ जब तपाईं यौन उत्तेजित हुनुहुन्छ।
तपाईंले एभानाफिल प्रयोग गर्नु अघि धेरै रक्सी पिउनुहुन्न। धेरै धेरै रक्सीले तपाईंलाई पूर्ण रूपमा एभानाफिल प्रभावको आनन्द लिनबाट रोक्न सक्छ। मदिरा र एवानाफिलको संयोजनले साइड इफेक्ट हुन सक्छ जस्तै चक्कर आयो जुन तपाइँको सेक्स ड्राइव र प्रदर्शन कम गर्दछ।
२ av घण्टा भित्र अpe्गुरको रस पिउनबाट बच्नुहोस् जुन तपाईं एभानाफिल लिनुहुन्छ र सेक्स गर्नुहुन्छ। अpe्गुरको रसमा केहि रसायनहरू हुन्छन् जसले तपाईंको रक्तप्रवाहमा एभानाफिलको स्तर बढाउछ त्यसैले केही साइड इफेक्टको सम्भावना बढाउँदछ।
हेल्थकेयर प्रदायकसँग तपाइँको भेटहरूको सम्मान गर्नुहोस् ताकि उसले तपाइँको प्रगतिको अनुगमन गर्न सक्दछ। यदि तपाईं एभानाफिल लिएर फोरप्लेमा संलग्न भए पनि, वा यदि तपाईंलाई इरेक्शन हुन्छ भने पनि एरेक्शन प्राप्त गर्न असफल हुनुभयो भने, तर यो यौन सम्बन्ध राख्न र ओर्गास्ममा पुग्न लामो समय सम्म रहँदैन, तपाईंले आफ्नो डाक्टरलाई बताउनु पर्छ।
समान लागू हुन्छ यदि एभानाफिल तपाईंको लागि अति शक्तिशाली देखिन्छ; जब तपाईको निर्माण तपाईले सेक्स गरे पछि फेर्ने छैन। तपाईंको डाक्टरलाई यसको बारे जान्नुहोस् ताकि उसले तपाईंको डोज कम गर्न सकोस्। साथै, नबिर्सनुहोस् तपाईंको डाक्टरले सिफारिस गरेको भन्दा बढी avanafil लिनुहुन्न।
Avanafil (Sendra) प्रयोग गर्दै
एभानाफिल प्रभावकारी हुनको लागि, तपाइँले तपाइँको डाक्टरले भने अनुसार यो लिनुभयो भने यसले मद्दत गर्दछ। डाक्टरले तपाईंलाई कति लिने र कुन समयमा बताउनेछ।
अन्य इरेक्टाइल डिसफंक्शन औषधिहरू जस्तै, एभानाफिल प्रयोग गर्न सजिलो छ। औषधि पाउडर वा ट्याब्लेटको रूपमा आउँदछ। एभानाफिलले छिटो काम गर्ने भएकोले तपाईंले सेक्स गर्नु अघि १ 15 - minutes० मिनेटको बीचमा लिनु पर्छ। यदि तपाईंको चिकित्सकले तपाईंलाई एभानाफिलको एक कम खुराकको लागि सिफारिश गरेको छ भने, m०mg एक दिन भन्नुहोस्, यो सिफारिस गरिएको छ कि तपाईंले यौन सम्बन्ध राख्नु अघि minutes० मिनेट भन्दा कम समय लागु औषधि खानु हुँदैन। तपाईको शरीरले पूर्ण रुपमा औषधी नै समाहित गर्दछ भन्ने यो उत्तम तरीका हो। यो ध्यान देने योग्य छ कि भोकाएको छ भने तपाईं avanafil पाउडर लिन सक्नुहुन्छ यो तपाईंको शरीर मा कुनै नकारात्मक प्रभाव हुँदैन।
तपाईले यो औषधि प्रति दिन एक पटक मात्र लिन सिफारिस गर्नुहुन्छ। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईको शरीरले कसरी औषधिमा प्रतिक्रिया जनाउछ भनेर निगरानी गर्दछ र तपाईलाई पूरा एभानाफिल लाभ लिनका लागि खुराक समायोजित गर्न सक्छ।
प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हुनाले तपाईले आफ्नो चिकित्सकसँग कुरा गर्नुपर्नेछ तपाईलाई प्रिस्क्रिप्शन दिन भन्दा पहिले avanafil खरीद। डाक्टरले तपाईलाई धेरै प्रश्नहरू सोध्नेछ र सम्भव भएमा एवानाफिल कुन खुराक तपाईको लागि उपयुक्त छ निर्धारण गर्न मद्दत गर्न केही परीक्षणहरू गर्दछ। स्वास्थ्य, उमेर, र अन्य औषधि तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको छ। उत्पाद लेबलमा जानकारी अनुसार वा तपाईंको डाक्टरले संकेत गरे अनुसार एभानाफिल प्रयोगमा टाँसिनुहोस्। याद गर्नुहोस् कि एवानाफिलले ईडी र रायनाउडको घटना बाहेक मेडिकल अवस्थाको उपचार गर्दैन।
Van०, १००, र २००mg: Avanafil तीन फरक शक्तिहरूमा उपलब्ध छ। यस्तो सम्भावना छ कि तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई १००mg ताकतमा सुरू गर्दछ, तर तपाईंको शरीरले कसरी प्रतिक्रिया गर्दछ त्यसमा आधारित डोज परिवर्तन गर्न सक्दछ। प्रत्येक पटक जब तपाईं एभानाफिल पाउडर खरीद गर्नुहुन्छ, लेबललाई जाँच्नुहोस् तपाईंसँग सही शक्ति छ कि छैन तपाईंको लागि निर्धारित छ।
ईडीको मूल्या्कनले त्यहाँ अन्तर्निहित कारणहरू छन् कि भनेर पत्ता लगाउन एक पूर्ण चिकित्सा मूल्यांकन समावेश गर्नुपर्दछ, र साथै अन्य उपचार विकल्पहरू पनि निर्धारण गर्दछ। उदाहरणको लागि, मनोवैज्ञानिक र शारीरिक मुद्दाहरूको संयोजनले ED निम्त्याउन सक्छ।
केही शारीरिक अवस्थाले यौन प्रतिक्रियालाई असर गर्छ कि चिन्ताको परिणामस्वरूप ढिलो यौन प्रतिक्रिया जब यी सर्तहरूको उपचार गरिन्छ, यौन ड्राइभ पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ। ईडीको साधारण शारीरिक कारणहरूले समावेश गर्दछ:
एथेरोस्क्लेरोसिस (रक्त वाहिका समस्याहरू)
मेटाबोलिक सिन्ड्रोम - यो एक यस्तो अवस्था हो जहाँ रक्तचाप, इन्सुलिनको स्तर, कोलेस्ट्रोल र शरीरको बोसो बढेको छ।
पेयरोनी रोग - यदि दाग टिश्यू लि in्गमा विकसित हुन्छ भने
रक्सी र पदार्थ / लागुपदार्थको दुर्व्यसन
मेरुदण्ड वा पेल्विक क्षेत्रमा चोटपटक वा शल्यक्रियाहरू
विस्तारित प्रोस्टेट वा प्रोस्टेट क्यान्सरको उपचार
यौन उत्तेजनामा ​​दिमागले ठूलो भूमिका खेल्दछ। यौन उत्तेजनालाई असर पार्ने धेरै चीजहरू दिमागबाट सुरू हुन्छ। ईडीको मनोवैज्ञानिक कारणहरूले समावेश गर्दछ:
चिन्ता, उदासीनता, वा अन्य मानसिक अवस्थालाई असर पार्ने अवस्थाहरू स्वास्थ्य
सम्बन्ध समस्याहरू जुन कम सञ्चार, तनाव, वा अन्य चिन्ताको परिणाम हो
असन्तुष्ट यौन जीवन
कम आत्म-सम्मान वा अप्ठ्यारो वा
असक्षमता तपाईंको पार्टनर गर्भवती गर्न
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईंलाई एभनाफिल सल्लाह दिनु अघि, उसले केवल माथिका मुद्दाहरूलाई मात्र हेर्दैन, तर निम्न कुराहरू पनि:
यदि तपाईंसँग पूर्व-अवस्थित हृदयस्थिति छ भने, तपाईं लि .्गमा संलग्न हुँदा तपाईंको हृदय जोखिम हुन सक्छ। यस कारणका लागि, अन्तर्निहित हृदय स्थिति हुनेहरूका लागि एभानाफिलको प्रयोग गरेर इरेक्टाइल डिसफंक्शन उपचारको सिफारिश गरिदैन।
बिरामीहरू जसको बायाँ भेन्ट्रिकलहरू अवरुद्ध हुन्छन् वा बिग्रेको स्वायत्त रक्तचाप नियन्त्रणको साथ Sendra र अन्य vasodilators का लागि संवेदनशील हुन्छन्।
लामो समय सम्म निर्माण
PDE5 का केही प्रयोगकर्ताहरूले एक निर्माण रिपोर्ट गरेका छन् जुन चार घण्टा भन्दा बढिमा रहन्छ। केहीले दर्दनाक इरेक्शनहरू पनि रिपोर्ट गरेका छन् जुन hours घण्टा भन्दा बढि हुन्छ (प्रियापिज्म)। यदि तपाईं यी सर्तहरू मध्ये कुनै पनि अनुभव गर्नुहुन्छ भने तपाईंले तत्काल मेडिकल हेरचाह गर्नुपर्छ। यो किनभने यदि तपाइँ ढिलाइ गर्नुभयो र तपाइँ स्थायी रूपमा तपाइँको क्षमता गुमाउन सक्नुहुन्छ भने तपाइँको Penile ऊतक बिग्रन सक्छ।
पेनाइल एनाटॉमिकल विकृति भएका बिरामीहरूले (पेयरोनी रोग, ए ang्गुलेसन, वा एulation्गुलेसन) धेरै सावधानीका साथ एभानाफिल प्रयोग गर्नु पर्छ। त्यस्तै, pripism पैदा गर्न सक्ने सर्तहरू ती बिरामीहरू पनि avanafil प्रयोग गर्दा सावधान हुनुपर्छ।
यदि तपाईं Sendra वा कुनै अन्य PDE5 अवरोधकर्ताहरूको प्रयोगको क्रममा दृष्टि नोक्सानीको अनुभव गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले जतिसक्दो चाँडो आफ्नो डाक्टरलाई बताउनु पर्छ ताकि तपाईं उपयुक्त चिकित्सा ध्यान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
दृष्टि नोक्सान NAION को चिन्ह हो, PDE5 अवरोधकर्ताहरू प्रयोग गर्ने मानिसहरूमा देखा पर्दछ। धेरैबाट avanafil समीक्षा, तपाईंले यो याद गर्नुहुनेछ कि यो एक अनियमित अवस्था हो, तर तपाईं यस बारे सचेत हुनुपर्छ।
यो PDE5 अवरोधकर्ताहरूसँग सम्बन्धित अर्को दुर्लभ अवस्था हो। यदि तपाईं एभानाफिल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंलाई अचानक हराउने वा सुन्ने क्षमता घटेको छ भने, जतिसक्दो चाँडो आफ्नो डाक्टरलाई सचेत गराउनुहोस्। सुनुवाईको हानी प्रायः चक्कर आउने वा टिनिटसको साथ हुन्छ, तर यो स्पष्ट हुँदैन कि यी लक्षणहरू PDE5 अवरोधकर्ताहरूबाट हुनुपर्दछ।
यी लक्षणहरूको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन यो डाक्टरहरूको हो, तर यदि तपाईंले ती अनुभवहरू गर्नुभयो भने, यदि तपाईंले डाक्टरबाट उचित निदान नगरेसम्म तपाईंले एवानाफिल लिन रोक्नुभयो भने यसले सहयोग पुर्‍याउँछ।
Avanafil साइड इफेक्ट
Sendra एक हो सुरक्षित, प्रभावी औषधि जसको केवल केही साइड इफेक्टहरू छन्, जसमध्ये कुनै पनि प्रचलित छैन। उदाहरण को लागी, टाउको दुख्ने, Sendra को सबै भन्दा साधारण साइड इफेक्ट, मात्र औषधि प्रयोग गर्ने पुरुषहरु को पाँच देखि 10 प्रतिशत लाई मात्र असर गर्छ।
एवानाफिलको अर्को सामान्य साइड फ्ल्याश फ्ल्याशिंग हो। एभानाफिल समीक्षाबाट, यो फेला पर्‍यो कि यो अवस्था प्रयोगकर्ताहरूको - -%% बीचमा हुन्छ। टाउको दुख्ने र रगत प्रवाहमा एवानाफिलको प्रभावबाट फ्लशिंग परिणामहरू र यी साइड इफेक्टहरू केही घण्टा पछि प्राय: फीका हुन्छन्। अन्य एवानाफिल साइड इफेक्टमा नाकको भीड, चिसो लक्षण (नासोफेरेंजाइटिस), र कम्मर दुखाई समावेश छ। यी सबै एवानाफिल साइड इफेक्टहरू प्रयोगकर्ताहरूको थोरै प्रतिशतमा देखा पर्दछ।
कहाँ Avanafil खरीद गर्न
के तपाइँ चाहानुहुन्छ? एभानाफिल किन्नुहोस्? यदि हो भने, तपाईंले एक विश्वासिलो एवानाफिल आपूर्तिकर्ता छान्नु पर्छ जसले तपाईंलाई ग्यारेन्टी गर्न सक्दछ कि तपाईंले खरीद गरिरहनु भएको एभानाफिल पाउडर उत्तम गुणको हो। हामी त्यस्ता आपूर्तिकर्ता हौं। हामी हाम्रा उत्पादनहरू सीएमओएपीआईबाट प्रख्यात एवनाफिल निर्माताबाट सीधा स्रोत दिन्छौं।
सीएमओएपीआई एभानाफिल मात्रै अन्य इरेक्टाइल डिसफंक्शन ड्रग्स पनि बनाउँछ। एभानाफिल लागतको बारेमा चिन्ता नलिनुहोस्। हामी तपाईसँग पार्टनर बनाउन चाहान्छौं धेरै वर्षका लागि तपाईसँग एभानाफिल आपूर्ति गर्नका लागि। त्यसकारण हाम्रो एभानाफिल लागत धेरै पकेट मैत्री छ।
"एफडीएले स्ट्रेन्ड्रालाई इरेक्टाइल डिसफंक्शनका लागि स्वीकृत गर्दछ" (प्रेस विज्ञप्ति)। खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए)। अप्रिल २,, २०१२
"Spedra (avanafil)"। यूरोपीयन चिकित्सा एजेन्सी। १ April अप्रिल २०१ Ret पुन: प्राप्त गरियो।
युएस 6797709611 2003०,, यामदा के, मत्सुकी के, ओमोरी के किक्कावा के, "सुगन्धित नाइट्रोजन युक्त me-झिल्लीयुक्त चक्रीय यौगिकहरू", ११ डिसेम्बर २०० XNUMX लाई जारी गरियो, तानाबे सेइआकू सीओ लाई तोकिएको
"VIVUS ले Menarini संग Avanafil साझेदारी घोषणा गर्‍यो"। Vivus Inc. 2015-12-08 मा मूल बाट संग्रहीत।
"VIVUS र Metuchen फार्मास्यूटिकल्स Stendra को वाणिज्य अधिकार को लागी इजाजतपत्र सम्झौता घोषणा"। Vivus Inc. October अक्टुबर २०१।।